सावधान ! नेपालमा बढ्दो छ सङ्क्रमणको गति - Sawal Nepal
सावधान ! नेपालमा बढ्दो छ सङ्क्रमणको गति
रासस १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १९:१६
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड–१९ सङ्क्रमणको गति मुलुकमा क्रमशः बढ्दै गएको छ । सङ्क्रमण दर बढेसँग जोखिमको चुनौती पनि उत्तिकै छ । कूल एक हजार ४०१ सङ्क्रमितमध्ये पछिल्लो एक सातामा मात्रै ८०४ जनामा रोग देखियो । जेठ १४ पछि चार दिनमा दैनिक सय भन्दामाथि सङ्क्रमित भेटिए । उक्त चार दिनमा मात्रै ६२९ संक्रमित फेला परे । शुक्रबार १७० जनामा देखिएको कोभिड–१९उन्नाइसले बढेर आज सबैभन्दा बढी १८९ जनामा देखियो ।
सरकारले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएकाले पनि सङ्क्रमणदरको सङ्ख्या बढोत्तरी देखिएको प्रवक्ता डा.देवकोटा बताउँछन् । तर विगतमा भन्दा विस्तारै सङ्क्रमण फैलिनेक्रम भने बढ्दो गतिमा छ ।
यसको मुख्य लक्षण भनेको ज्वरो आउनु, सास फेर्न अफ्ठ्यारो हुनु र छातीमा सङ्क्रमण हुनु हो । रुघाखोकी जस्तै लक्षण देखिने भाइरस श्वासप्रश्वास, एक जनाले प्रयोग गरेको सामान वा रुमाल प्रयोग गर्दा, हात मिलाउँदा सर्नसक्छ ।
यसको नियन्त्रणका लागि तत्कालै पहिचान गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन र निदानात्मक उपाय अपनाउने, सङ्क्रमित व्यक्तिको नजिकका मान्छे खोजेर उनीहरुको निगरानी गर्ने जस्ता उपाय अपनाउनुपर्नेमा चिकित्सकको जोड छ । नेपालले पनि यही विधि अप्नाउँदै आएको छ ।
विश्वभर अहिलेसम्म २१६ मुलुकमा कोभिड–१९ देखिएको छ । कूल ६० लाख ४८ हजार बढी सङ्क्रमित भेटिएका छन् । तीन लाख ६७ हजार २२८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । दुई लाख ६८ हजार निको भएर घर फर्किएका छन् ।
नेपालमा हालसम्म पिसिआर ६६ हजार ७२९ जनाको र एक लाख सात हजार ५५ जनाको आरडिटीबाट परीक्षण गरिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा चार हजार बढीको परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आज मात्रै नयाँ सङ्क्रमित १८९ जना छन् । हालसम्म कूल एक हजार ४०१ पुगेकामा २१९ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
#corna #covid #कोरोना